Fitaovana mifanentana IOS 7 sy endri-javatra misy | Vaovao IPhone
iOS 7 dia eo akaiky eo. Ao amin'ny Actualidad iPad dia nandinika ny iray amin'ireo Betas 6 niseho hatramin'ny volana Jona izahay, daty izay nahitantsika ny sambany nahita ny rafitra fikirakirana finday vaovao an'ny Apple izay havoaka amin'ity fararano ity. Mety efa fantatrao angamba hoe iza amin'ireo fitaovana ireo no hifanaraka ary iza no tsy hifanaraka, saingy mety tsy mazava tsara aminao inona ny fampiasa iOS 7 ho hita amin'ny fitaovana tsirairay. Izahay dia manazava amin'ny antsipiriany anao ny zava-drehetra mba tsy hisalasalana.
4 Fitaovana vaovao
Mihoatra noho ny fahafantarana izany ny iPhone 3GS dia mivoaka amin'ny lisitra fampifanarahana iOS 7. Apple dia nijanona tsy nivarotra ilay fitaovana efa ho herintaona lasa izay, ary efa marika famantarana izany fa tsy ho eo intsony ny fanohanan'ny Apple. Ny ambiny amin'ireo maodely iPhone dia azo havaozina, fa amin'ny tsy fitovizany.
Ny iPhone 4 no iray amin'ireo endri-javatra tsy dia lehibe loatra azonao ankafizina. Tsy misy an'i Siri hatramin'ny nanombohan'ny mpanampy an'i Apple, dia tsy maintsy manana ny asany amin'ny fampiharana ny sivana amin'ny sary ihany izy io, fa amin'ny sarimihetsika, ary ny mety hakana sary toradroa. Ao amin'ny iPhone 4S dia tsy maintsy ampiantsika Siri, na dia tsy voafaritra manokana amin'ny iOS 7 aza izany, ny sivana avy amin'ny fakantsary mihitsy, ary ny mety hakana sary panoramic. Ary farany, ao amin'ny iPhone 5 dia ho hitantsika ireo fiasa rehetra ireo miampy ny fiasa AirDrop hizara rakitra.
Apple dia mivarotra maodely 3 iPad: iPad 2, iPad Retina 4, ary iPad Mini. Amin'ireo dia tsy maintsy ampidirintsika ny iPad retina 3 izay najanona tamin'ny fanombohana ny iPad 4 vaovao, fa izay mazava ho azy fa azo havaozina amin'ny iOS 7. Samy hafa ny fiasan'izy ireo.
Ny iPad 2 dia azo havaozina, saingy tsy hanana ny lahasa lehibe indrindra amin'ny iOS 7 izy io. Tsy misy na inona na inona efa natoronay teo aloha tao amin'ny fizarana iPhone azo ampiasaina amin'ny iPad 2. Havaozina fotsiny izy io, ny fampiharana ho an'ny iOS 7 dia hiasa ao aminy, fotoana. Ny iPad Retina 3, ilay misy mpampitohy 30-pin, dia hankafy an'i Siri, ny fahaizana mampiditra sivana amin'ireo sary eo amin'ilay horonana ary maka sary toradroa. Ny iPad Retina 4, ilay misy mpampitohy ny tselatra, dia hanana ny safidinao amin'ny fampiasana AirDrop. Ny iPad Mini dia hizara asa mitovy amin'ny iPad Retina 4. Tsy misy iPad afaka maka sary panoramic na mampiditra sivana mivantana amin'ny fakan-tsary.
Ny hany tokana azo havaozina amin'ny iOS 7 dia ny iPod Touch 5G, izay hanana ny fiasa rehetra ananan'ny iPhone 5, afa-tsy ny mety hisian'ny antso.
Mbola mila mahita ny fiasa vaovao izay hitondra ireo fitaovana vaovao hiseho amin'ity hetsika ity, andrasana amin'ny 10 septambra. Mpamaky rantsantanana azo atao amin'ny iPhone 5S, na ireo fiasa vaovao mety hatolotr'ireo iPads vaovao. Mbola tsy fantatsika izay rehetra azon'ny iOS 7 omena ho azy, tsy maintsy miandry ny famoahana ireo vokatra vaovao isika.
Fanazavana fanampiny - Ahoana ny fizarana rakitra amin'ny alàlan'ny AirDrop ao amin'ny iOS 7
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Fitaovana mifanentana IOS 7 sy endri-javatra misy
JOSPE dia hoy izy:
Luis, raha tadidiko tsara, tamin'ny beta 5 dia nampian'izy ireo ny safidin'ny sivana ao anaty fakantsary ho an'ny iPhone 4S, noho izany dia endri-javatra iray hafa azo ampiasaina ho an'io fitaovana io izy ireo.
Valiny amin'i JOSPE
Marina, ao amin'ny Beta 4 araka ny hitako. Misaotra !!! Manitsy aho. 😉
Fantatrao ve raha niasa tamin'ny iPad 3 indray ny mangarahara
Manana ipad 2 taranaka voalohany aho ary manantona ... isaky ny manandrana mandra-pahatongan'ny kinova beta 6 aho ary tsy misy lalana ... mivaingana ny safari ... na raha manidy rindrambaiko aho dia mivaingana ao amin'ny background ... maharary ... misy zavatra mahaliana amin'ny firaisana amin'ny iphone sy mavericks… ..
Martin Mandorla dia hoy izy:
Manana iPhone 4 sy iPad 2 aho ... Midika izany fa ao anaty lafaoro aho! toy ny mahazatra dia tsy maintsy miandry an'i Cydia hamonjy antsika isika !!!
Valiny tamin'i Martin Mandorla
Ross dia hoy izy:
Satria ny ipod 4g dia tsy hifanaraka, dia ho an'ny olona an-tapitrisany izay manana fitaovana tsy mifanaraka izay hipetrahantsika ary navelako hitia
Valiny tamin'i Ross
Sary roa hafa no hita miaraka amin'ny tranga iPhone 5C miloko manga
Apple dia manitatra ny fanoloana charger tsy nahazoana alàlana amin'ny sisa amin'ireo faritany